Semalt विशेषज्ञ: तपाईं, हो, तपाईं! के तपाईंलाई थाहा छ भूत रेफरर स्पाम के हो?
भूत रेफरल वा रेफरर स्पाम नक्कली ट्राफिक हो जुन तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा देखिन्छ। जहाँसम्म, जब तपाईं नजिकबाट हिटहरू कहाँबाट आउँदछन् भनेर जाँच गर्नुहुन्छ, तपाईं देख्नुहुनेछ कि ती एक सन्दर्भ वेबसाइटबाट हो र तपाईंको बाउन्स दरलाई धेरै हदसम्म बढाउँदछ। हालसालै, भूत सन्दर्भका दुई प्रमुख प्रकारहरू छन् Google एनालिटिक्स डेटा लाई प्रभावित। सर्वप्रथम, त्यहाँ स्प्याम बट्स र क्रलरहरू छन् जुन तपाईंको वेब पृष्ठहरू सूचकांक बनाउँदछ र रोबोट्स। txt फाईलहरूलाई वेवास्ता गर्दछ। दोस्रो प्रकार दारोडार हो जुन अवैध ट्राफिक उत्पादन कार्यक्रमको रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। रायन जोनसन, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक बताउँछन् कि मुख्य मुद्दा भनेको भूत रेफरल स्प्याम बहु डोमेनबाट आउँदछ, जस मध्ये धेरै वयस्क विषयवस्तु हुन् र वेबसाइटहरू चौबीसै पटक हिट गर्दछन्।
स्प्याम बट्स र भूत सन्दर्भको बीचमा भिन्नता ट्राफिकको गुणस्तर हो। भूत रेफरर स्पामले नयाँ र अज्ञात डोमेनहरूबाट ट्राफिक पठाउँदछ, तर वास्तवमा तपाईंको वेबसाइटहरूमा कहिले पनि जाँच्दैन। यसको सट्टामा, ती डिजिटल ट्रेलहरू छोड्छन् तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स खाताहरूलाई असर गर्दछ र तपाईंको बाउन्स दर बढाउँदै। तिनीहरूको लक्ष्य तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स कोडहरू ट्र्याक गर्नुहोस्, र तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको खातामा फिल्टरहरू सिर्जना गरेर ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरिकाले, तपाइँ भूत रेफरल स्पामलाई तपाइँको एनालिटिक्स डेटा नष्ट गर्नबाट रोक्न सक्षम हुनुहुनेछ।
के भूत रेफरर स्पामले मेरो एसईओ वा वेबसाइटलाई असर गर्छ?
भूत रेफरर स्पामले तपाईंको एसईओ वा वेबसाइटलाई असर गर्दैन भनेर उल्लेख गर्न सुरक्षित छ। हामीले पहिले नै वर्णन गरिसकेका छन कि उनीहरू वास्तवमै तपाईंको वेबसाईटमा आउँदैनन तर तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स डाटाको शीर्ष रेफररहरूमा देखाउँछन्। जे होस्, त्यो तपाईंको डाटा र एनालिटिक्स रिपोर्टहरूलाई असर गर्दछ। भूत रेफरकर्ता स्प्यामले दिनभर तपाईंको साइटमा हिट गर्दछ र २ 24 घण्टामा एक हजार हिटहरू देखाउँदछ।
भूत रेफरर स्प्यामले तपाईंको साइटमा निम्न चीजहरू गर्दछ:
यसले तपाईंको वेब पृष्ठहरूको समग्र बाउन्स रेटलाई बृद्धि गर्दछ।
यसले तपाईंको ब्लग वा साइटमा आगन्तुकहरूको संख्या घटाउन सक्छ।
यसले रेफरल डाटा स्क्यू गर्दछ र यसले तपाईंलाई कडा बनाउँदछ कि ट्राफिक क्वालिटी हो वा होइन।
यसले गोल रूपान्तरण र स्थान डेटामा बाधा पुर्‍याउँछ, तपाईंलाई रूसबाट धेरै भ्रमणहरू पठाउँदै।
कसरी रेफरर स्प्यामरहरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताहरूमा डाटा पठाउँछन्?
तपाईंको जाभास्क्रिप्ट कोडमा, एक ट्र्याकि ID आईडी गुगल विश्लेषक बताउँछ जो रेफरल वेबसाइट तपाईंलाई यातायात पठाउँदछ। स्प्यामरहरू निम्न तीन विधिहरू प्रयोग गर्दछ नक्कली आगंतुकहरू र हिटहरू तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताहरूमा पठाउन:
१. तिनीहरूले जाभास्क्रिप्ट कोड आफ्नै वेबसाइटमा घुसाउँदछन् र तिनीहरूको वेब पृष्ठहरूमा हिटहरू उत्पन्न गर्दछन्।
२. तिनीहरूले तपाईंको वेबसाइटलाई अनुक्रमणिकामा स्वचालित बोटहरू सेट अप गर्छन्, सन्दर्भकर्ताहरू नक्कल गर्दछन् र धेरै भ्रमणहरू देखाउँदछन्।
They. तिनिहरूले विशिष्ट गुगलको एनालाइटिक्समा डाटा पठाउन विशिष्ट बट्सहरू सेट अप गरे र वास्तविक सन्दर्भ साइटहरू समावेश गर्दैन।
भूत रेफरर स्पाम रोक्न उत्तम तरिका भनेको फिल्टरहरू सिर्जना गर्नु वा तपाईंको .htaccess फाईल सम्पादन गरेर हो। तपाईले यति धेरै फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईको गुगल एनालाइटिक्स डेटा बर्बाद हुनबाट शicious्कास्पद हिटहरू रोक्न चाहनुहुन्छ।